Tag: ụlọ ahịa nri | Martech Zone
Kroger bụ ụlọ ahịa nnukwu ụlọ na m hụrụ n'anya n'ezie. Ha na-enye nnyefe ụlọ, iburu, ndenye ọpụpụ onwe onye, ​​nyocha nyocha, na ndị ọzọ. Companylọ ọrụ ahụ na-amata na ịnye uru na ọrụ ndị ahịa dị oke mkpa maka ọganiihu ọ bụla. Teknụzụ, n'ezie, bụ ụzọ ịnabata nke a. Nke ahụ apụtaghị na ndị mmadụ na usoro adịghị mkpa, ọ pụtara naanị na itinye ego iji nye ndị ahịa gị uru bụ n'ikpeazụ bụ itinye uche n'echiche gị.